Iintlobo ze-Chromosome Mutations -Volution and Genetics
I-Microevolution isekelwe kwiinguqu kwiimodeli ezenza iintlobo zitshintshe ngokuhamba kwexesha. Ezi zinguqu zinokuguquka kwi-DNA , okanye ziyakwenza iimpazamo ezenzeka ngexesha le- mitosis okanye i- meiosis ngokuphathelele kuma- chromosomes . Ukuba ama-chromosomes awahluleki ngokuchanekileyo, kunokukho utshintsho oluchaphazela ukuveliswa kwemfuyo yonke.
Ngexesha le-mitosis kunye ne-meiosis, i-spindle iphuma kuma-centrioles kwaye ifakwe kuma-chromosomes kwi-centromere ngeli nqanaba elibizwa ngokuba yi-metaphase. Isigaba esilandelayo, u-anaphase, ufumana udade we-chromatids obanjwe kunye ne-centromere ekhutshelwe ngaphandle kweengcambu eziphambene neseli nge-spindle. Ekugqibeleni, loo ma-chromatids odade, asemzimbeni afana nomnye, aya kufikelela kwiiseli ezahlukeneyo.
Ngamanye amaxesha kukho iipazamo ezenziwa xa udade we-chromatids ekhutshwa ngaphandle (okanye nangaphambi koko xa ewela kwiprophase ye-meiosis). Kungenzeka ukuba i-chromosomes ayiyi kukhishwa ngaphandle ngokuchanekileyo kwaye inokuchaphazela inani okanye inani lezifo ezikhoyo kwi-chromosome. Iinguqulelo ze-Chromosome zenza ukuba utshintsho lombonakalo lwezinto zezilwanyana. Oku kunokukhokelela ekulungiseni izinto ezinokukunceda okanye ukuphazamisa iintlobo njengoko zijongene nokukhethwa kwendalo .
I-Anaphase kwi-tip ye-onion tip tip. I-Getty / Ed Reschke
Ekubeni i-chromatids yoodade iikopi ezichanekileyo zomnye nomnye, ukuba abahluli phakathi, ezinye iizakhi zenziwe ngokuphindaphindiweyo kwi-chromosome. Njengoko udade we-chromatids athatyathwa kwiiseli ezahlukeneyo, iseli kunye namajelo aphindaphindiwe ziya kuvelisa iiprotheni ezingaphezulu kunye nokugqithisa umgangatho. Elinye igalethi elingenayo loo geni lingabhubhisa.
Ukuwela. Getty / FRANCIS LEROY, BIOCOSMOS
Ukuba kukho impazamo ngexesha le-meiosis elibangela ukuba inxalenye ye-chromosome iqhekeke kwaye ilahleke, oku kubizwa ngokuba kususwa. Ukuba ukususwa kwenzeka ngaphakathi kwimizi ebalulekileyo ekusindeni komntu, kunokubangela iingxaki ezinzulu kunye nokufa ngenxa ye-zygote ezenziwe kulelo gama kunye nokususwa. Ngamanye amaxesha, inxalenye ye-chromosome elahlekileyo ayiyi kubangela ukuthotywa kwenzalo. Olu hlobo lokususa luguqula iimpawu ezikhoyo kwi- pool yolwazi . Ngamanye amaxesha ulungelelaniso luncedo kwaye luya kukhethwa ngokufanelekileyo ngexesha lokhetho lwendalo. Ngamanye amaxesha, oku kususwa kwenza ukuba inzalwane ibuthathaka kwaye baya kufa ngaphambi kokuba bakwazi ukuvelisa kwaye badlulise i-gene entsha esetyenziswe kwisizukulwana esilandelayo.
Uguquko lwe-Chromosome. Getty / Chris Dascher
Xa iqela le-chromosome liyekile, akusoloko lilahleka ngokupheleleyo. Ngamanye amaxesha i-chromosome iya kudibanisa kwi-chromosome eyahlukileyo, engekho-homologous eye yalahleka isiqwenga. Olu hlobo lokuguquguquka kwe-chromosome lubizwa ngokuba yi-translocation. Nangona i-gene isilahlekanga ngokupheleleyo, le ntshintsho ingabangela iingxaki ezinzulu ngokuba neentsholongwane ezifakwe kwi-chromosome engalunganga. Ezinye iimpawu zidinga izakhi zofuzo ezikufuphi ukuze zenze ukuthetha kwazo. Ukuba bahlala kwi-chromosome engafanelekanga, ke abanaloo majelo omhlaza ukuze baqalise kwaye abayi kuveliswa. Kwakhona, kunokwenzeka ukuba i-gene ayizange iboniswe okanye ivinjelwe ngamajethi asondeleyo. Emva kokutshintshiselwa, abo bavimbelayo abanakho ukuyeka ukuthetha kwaye i-gene iya kubhalwa kwaye iguqulelwe. Kwakhona, kuxhomekeke kwimfuza, le nto ingaba utshintsho oluhle okanye olubi kwiintlobo.
Ama-Chromosomes ukusuka kwindoda yomntu. I-Getty / Ed Reschke
Enye inketho yecandelo le-chromosome eliye laphulwa libizwa ngokuba yi-inversion. Ngethuba lokuguquka, isiqwenga se-chromosome sijikeleza kwaye sithinteka kwi-chromosome yonke, kodwa ngaphantsi. Ngaphandle kokuba izakhi zofuzo zimele zilawulwe ngamanye amajethi ngoqha ga mshelwano, i-inversions ayilona ingxaki kwaye kaninzi igcina i-chromosome isebenza ngokufanelekileyo. Ukuba akukho mphumela kwizilwanyana, ukuguqulwa kuthathwa njengenguqu ephilileyo.
Indlela i-Gene Mutation isebenza ngayo
IGenesis kunye neGénétic Heritage
I-Chromosomes ikhetha njani i-Sex
Indlela Yokuhlangula Umntu Ogqithiseleyo Kwinqanawa
Umsila kaMare kunye neMacKerel Scales kwiNkcubeko yeMimoya
Amazwe athandwayo kakhulu njengeendawo zoKhenketho
Izipho Zomlingo Zona
Asinalo Mad Ngezo 20 Iziganeko Ezihlambulukileyo Zokutshabalalisa
IRekhodi Yokukhuselwa Kwezilwanyana ze-Obama Administration